Soo -saareyaasha Alaabada iyo Alaab -qeybiyeyaasha - Warshadda Alaabada Shiinaha
Naxaasku waa daawaha naxaas iyo zinc oo leh shaqo aad u weyn, daxalka iyo xirashada iska caabinta laakiin tabinta korantada oo liidata. Zinc -ka ku jira naxaasku wuxuu bixiyaa iska -caabbinta abrasion -ka waxayna u oggolaanaysaa xoogga gilgilka sare. Ka sokow, waxay sidoo kale bixisaa adkayn sare marka la barbar dhigo naxaas. Naxaasku waa daawaha ku salaysan naxaasta ugu qaalisan sidoo kale waa shay caadi ah oo loogu talagalay mesh silig. Noocyada naxaasta ah ee ugu caansan ee loo isticmaalo mesh silig -xidhka ah waxaa ka mid ah naxaas 65/35, 80/20 iyo 94/6.
Maro naxaas ah oo naxaas ah
Naxaasku waa bir jilicsan, la malayn karo oo duleel leh oo leh kuleyl iyo koronto aad u sarreeya. Markay hawada soo gasho muddo dheer, falcelinta oksaydhka oo gaabis ah ayaa dhacda si ay u samaysato lakab oksaydh naxaas ah oo sii kordhiso iska caabbinta daxalka ee naxaasta. Sababtoo ah qiimaheeda sare, naxaasku ma aha wax caadi ah oo loogu talagalay mesh silig.
Naxaasta fosfoorku wuxuu ka samaysan yahay naxaas oo ay ku jirto maadada fosfooraska oo ah 0.03 ～ 0.35%, Waxyaabaha Tinku ka kooban yahay 5 ～ 8% Waxyaabaha kale ee raadraaca sida birta, Fe, zinc, Zn, iwm waxay ka kooban yihiin ductility iyo iska caabin daal. Waxaa loo adeegsan karaa qalabka korontada iyo farsamada, iyo isku halaynta ayaa ka sareysa tan alaabta daawaha naxaasta caadiga ah. Mesh silig -tollayn ah ayaa ka sarreeya mesh silig naxaas ah oo iska caabinaysa daxalka hawada, taas oo ah sababta ugu weyn ee adeegsiga mesh naxaasta ah ay uga kala duwan tahay codsiyada badda iyo milatariga ee kala duwan ilaa shaashadda cayayaanka iyo deegaanka. Isticmaalaha warshadaha ee marada siligga, mesh siligga naxaasta ahi waa ka adag yahay oo aan badnayn marka la barbardhigo mesh silig naxaas ah oo la mid ah, iyo natiijada, waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa codsiyada kala -soocidda iyo sifeynta.
Ahama Steel Dutch Weave Wire mesh
Stainless Steel dutch weave mesh silig, oo sidoo kale loo yaqaan maro biraha warshadaha, guud ahaan waxaa lagu soo saaraa fiilooyin si dhow u kala fog Waxaan ku bixinnaa maro shaandho bir ah oo warshadeed oo dhammaystiran oo ku yaal Dutch -ka caadiga ah, twill dutch iyo weave dutch. Iyada oo qiimaynta shaandhayntu u dhexayso 5 μm illaa 400 μm, dharka shaandheyntayada leh waxaa lagu soo saaraa waxyaabo badan oo isku jira, dhexroor silig ah iyo cabbirro furan si ay ula qabsadaan baahiyaha kala -shaandhaynta ee kala duwan. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa codsiyada shaandhaynta kala duwan, sida walxaha shaandhaynta, dhalaalashada & miirayaasha polymer -ka iyo miirayaasha soo -saarayaasha.
Ahama Steel Fine Wire mesh
Mesh: Laga soo bilaabo 90 mesh ilaa 635 mesh
3. si baaxad leh loogu adeegsado kala shaandhaynta iyo shaandhaynta iyo baaxadda ilaalinta inta lagu guda jiro qurxinta, macdanta, warshadaha batroolka iyo kiimikada, cuntada, daawada, wax soo saarka mashiinnada, qurxinta dhismaha, elektaroonigga, hawada sare iyo warshadaha kale
Sifeey shaandheyn mcajaladaha esh (oo mararka qaarkood loogu yeero shaashadaha xirmada ama cajaladaha shaandhaynta) ayaa laga sameeyaa xaashiyo bir ah oo la shubay ama la sinmay. Cajaladaha mesh silig ee tayada leh waxay ku yimaadaan qalab kala duwan oo bir ah waxaana laga heli karaa dhowr cabbir, qaabab, iyo dhumuc ahaan codsi kasta. Alaabooyinkayagu waa kuwo adag, muddo dheer soconaya, shaqaynaya, oo isku-dhafan.
Shaashadda shaandhaynta dhululubadu waxay ka samaysan tahay shaashado hal -dhinacle ah ama dhinacyo badan leh oo ku yaal geeska alxanka leh ama geesaha xadka aluminium. Waa mid waarta oo xoog badan oo shaashadda ka dhigaysa mid wax ku ool u ah soo -saaridda polymer -ka sida polyester, polyamide, polymer, caag la afuufay, Varnishes, rinji.
Shaashadaha shaandhaynta dhululubo ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa sidii shaandheeyeyaal si loo kala saaro ciid ama qayb kale oo wanaagsan oo biyo ah warshadaha ama waraabka.
Mesh silig-xidhka leh ee siligga leh waa walxo ka samaysan nikkel oo leh iska caabin wanaagsan oo ka samaysan biyaha badda, dareeraha kiimikada, chloride sulfur ammonia, chloride hydrogen, iyo warbaahinta aashitada kala duwan.
Monel 400 mesh silig-xidhkii waa nooc ka mid ah mesh daawaha u adkaysta daxalka leh qiyaas weyn, codsi ballaaran iyo waxqabadka dhamaystiran oo wanaagsan. Waxay leedahay iska caabin daxalka aad u fiican ee hydrofluoric acid iyo warbaahinta gaaska fluorine, iyo sidoo kale waxay leedahay iska caabin daxalka aad u fiican in lye diiran diiran. Isla mar ahaantaana, waxay u adkaysanaysaa daxalka ka yimaada xalalka dhexdhexaadka ah, biyaha, biyaha badda, hawada, xeryahooda dabiiciga ah, iwm. Muuqaal muhiim ah oo ka mid ah mesh daawaha ayaa ah in guud ahaan uusan soo saarin dildilaaca daxalka diiqadda oo leh waxqabad goyn wanaagsan.
Shaashadda Daaqada ee Birta ah:
1.Shaashadda cayayaanka birta ah waxaa laga tolay silig biraha ka samaysan, taas oo aan kaliya hagaajinaynin muuqaalka dhexroorkeeda siligga ganaaxa ah, laakiin sidoo kale waxay badeecadan ka dhigaysaa mid aad uga xoog badan shaashadda cayayaanka caadiga ah. Shaashadda daaqadda birta ah ee aan birta lahayn waa shaashadda cayayaanka aragga oo la hagaajiyay oo loogu talagalay in lagu kordhiyo aragtida dibadda, taasoo ka dhigaysa mid sii cad oo ka sii dhalaal badan. Waxay u oggolaanaysaa socodka hawada sare waxayna la kulmaysaa heerka sare ee ilaalinta cayayaanka. Waxay ku habboon tahay in laga been abuuro codsiyada baaritaanka caadiga ah sida daaqadaha, albaabada iyo balbalada waana ammaan in la isticmaalo qoryaha cadaadiska lagu daweeyo.
Waxyaabaha: Silig birta aan lahayn. 304, 316, 316L.
Cabbirka: 14 × 14 mesh, 16 × 16 mesh, 18 x14 mesh, 18 x18 mesh, 20 x20 mesh.
Ma daxalayn doono ama ma daxalayn doono, xitaa cimilada xeebta ama marka ay ku dhacaan roobab mahiigaan ah ama xaalado qoyan.
Waxay bixisaa muuqaal dibadeed oo weyn sababtuna tahay dhisme silig bir ah oo wanaagsan oo ka ilaaliya cayayaanka badankooda halka uu ku siinayo muuqaal kaamil ah oo ku saabsan hareerahaaga dibadda.
Si badbaado leh loogu isticmaalo qoryaha cadaadiska lagu daweeyo.
Adkaysan oo waara.
waxay bixisaa hawo aad u fiican, oo u oggolaanaysa neecaw qabow inay soo dhex gasho gurigaaga.
Epoxy dahaarka mesh siligku wuxuu inta badan ka kooban yahay fiilooyin bir ah oo cad oo isku wada duuban oo lagu dahaadhay budada cusbi epoxy tayo leh iyada oo loo marayo habka buufinta electrostatic si looga dhigo wax u adkaysta daxalka iyo aashitada. Mesh silig dahaarka leh ee epoxy waxaa badanaa loo isticmaalaa lakabka taageerada shaandhaynta kaas oo beddelaya mesh silig galvanized waana mid ku habboon xasilloonida qaab -dhismeedka iyo sidoo kale awooddiisa, waa qaybta ugu weyn ee shaandhooyinka. Sida caadiga ah midabka dahaarka epoxy waa madow, laakiin waxaan sidoo kale bixin karnaa midabada iyadoo loo eegayo shuruudahaaga, sida cawl, caddaan, buluug, ect. Mesh silig dahaarka leh oo dahaarka leh ayaa laga heli karaa duub ama la jarjaray. Waxaan had iyo jeer ballan-qaadnay inaan ku siinno mesh silig dahaarka leh oo leh dhaqaale, deegaan-saaxiibtinimo leh oo adkaysi kuu leh.
Qalabka: 304, 304L, 316, 316L
Width duudduuban: 36 ``, 40 '', 48 ``, 60 ''.
Hantida: Acidproof, iska caabin alkali, madax -adag oo waarta
Isticmaal: Ka qaadidda iyo shaandhaynta xaaladaha aashitada iyo alkaliinta. Shabag qallalan oo ku jira batroolka, kala shaandhaynta iyo mesh -ka baarista warshadaha fiber kiimikada iyo kiimikada, mesh dhaqidda warshadaha dahaarka korontada.
Waxay qaadataa walxaha birta ka samaysan ee 316, 316L, 304, 302 iwm si loo soo saaro mesh alxanka xirtay oo sifeyn gaar ah oo ka baxsan cabbirrada caadiga ah: ballacku wuxuu gaari karaa 2.1m, iyo dhexroorka siligga ugu sarreeya, 5.0 mm. Badeecaduhu waxay ku habboon yihiin shabaqa xayndaabka tayada sare leh, khaanadaha dukaamada waaweyn, qurxinta gudaha iyo dibaddaba, dambiisha cuntada, beeraha xoolaha dhogorta leh oo tayo fiican leh. Waxay leedahay mudnaanta xoojinta sare, miridh la'aan, ka-hortagga daxalka, acid/alkali-iska-caabbinta iyo iska-caabbinta madaxa, iwm.
Cmesh silig duudduuban ayaa laga sameeyay dhexroor silig oo u dhexeeya 1.5mm ilaa 6 mm. Geedi-socodkii hore-u-ruxidda, siligga ayaa marka hore la sameeyaa (la jarjaray) mashiinnada saxda ah iyadoo la adeegsanayo geerida Rotary oo si sax ah u qeexaysa kala-soocidda fiilooyinka. Tani waxay caymis ku tahay in fiilooyinka si adag isugu xiran yihiin isgoysyada. Fiilooyinkii hore loo ruqseeyay ayaa markaa lagu soo ururiyaa mashiinnada shirarka shaashadda ee sida gaarka ah loo habeeyay (looms). Nooca qallajinta ayaa go'aamiya nooca tolidda. ISO 4783/3 wuxuu qeexayaa noocyada caadiga ah ee tolidda.